डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ : गणत’न्त्रको भात पाक्न ढिलो हुँदा राजत’न्त्रको गो’बर नखाउँ ! – yuwa Awaj
मंग्सिर १३, २०७७ शनिबार 0
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समा’जवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रा’जतन्त्रको गो’बर नखान सु’झाव दिएका छन् । उनले युवाहरुलाई ग’णतन्त्रको भात पाक्न ढिलो हुँदा राज’तन्त्रको गोबर न’खान सु’झाव दिएका हुन् ।
राजा र राज’संस्थाको सम|र्थनमा देशका विभिन्न स्थानमा प्र’दर्शन सुरु भएपछि बाबुरामले युवाहरुलाई यस्तो आ’ग्रह गरेका हुन् । उनले आधा गिलास उपल’ब्धिलाई जोगाएर बाँकि गिलास भर्ने कि रिसको झोकमा आधा भरिएको गिलास घो’प्टाएर पूरै गिलास खाली गर्ने भन्दै राजसं’स्थाको सम’र्थन गर्ने युवाहरुलाई प्रश्न’समेत गरेका छन् ।
बाबुरामले अगाडिको स्या’लसँग ल’ड्दा पछाडि लु’केको ब्वाँ’सो नर्बि’सर्नसमेत सु’झाव दिएका छन् । सामाजिक स’ञ्जाल ट्वी’टरमा स’क्रिय बाबुरामले शनिबार बिहानै ट्वी’ट गर्दै यस्तो लेखेका हुन् । उनले स्याल र ब्वाँ’सो दुवैसँग ल’डेर अघि जाने सा’हस गर्न सु’झाएका छन् ।
युवासंग आ’ग्रह–गणत’न्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राज’तन्त्रको गो’बर नखाऊॅ ! अहिलेको आधा गिलास उपल’ब्धीलाई जोगाएर बॉकी’गिलास भरौं ! नकि रि’सको झो’कमा आधा भरिएको गिलास घोप्टा’एर पूरै गिलास खाली होस् । अगाडिको स्या’लसंग ल’ड्दा पछाडि झ्यां’गमा लुकेको ब्वॉ’सो नबि’र्सौं । दुबैसॅग ल’डेर अघिजाने साहस गरौं’, बाबुरामले ट्वी’टरमा लेखेका छन् ।
Prevपढन-लेख्न सक्ने भईन् बिनोदकी श्रीमती अनिता, छोरी सम्झेर धुरुधुरु रोइन्…हेर्नुहोस् ।(मनछुने भिडियो)
Nextबधाई दिँदै गाउँलेले भने – सपनाले गाउँकै नाम राखिन्…पूरा पढ्नुहोस् ।